ओलीले प्रचण्डलाई सोधे- तपाईंलाई अनुशासनको कारबाही किन नगर्ने? :: Setopati
ओलीले प्रचण्डलाई सोधे- तपाईंलाई अनुशासनको कारबाही किन नगर्ने? मेरो अरू नै काम छ, भोलिको सचिवालय बैठकमा आउन्नँ: प्रधानमन्त्री
मंगलबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच चर्काचर्की परेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दिउँसो १ बजेपछि भएको बैठकको सुरूमै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई आजको बैठकको एजेण्डा के छ?, सुरू गर्नुस् भनेर भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डले दुइटा प्रस्तावमा छलफल गर्ने एजेण्डा सुनाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डसँग आक्रोशित बनेका थिए।
'तपाईंले प्रस्ताव भनेको प्रस्ताव नै होइन। त्यो कुनै कमिटीले लेख्न अनुमति दिएको पनि होइन, विधान र पद्धतिअनुसार आएको पनि छैन। तपाईंले निजी रूपमा ल्याउनुभएको हो,' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो,'त्यो द्वेष, कुण्ठा, लाञ्छना, आलोचना र आरोप पत्रका रूपमा छ। पार्टीको साख खत्तम पार्ने गरी ल्याइएको छ। त्यस विषयमा बैठकमा छलफल हुन सक्दैन।'
प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता भएमात्रै बैठक अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए।
प्रचण्डले आफ्ना भनाइ राखेपछि समेत प्रधानमन्त्री ओली बोलेका थिए। त्यस क्रममा उनले केन्द्रीय कार्यालयको लोगो अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भएको आरोप लगाएका थिए।
गत कत्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेको राजनितीक प्रस्ताव, त्यसअघि सचिवालय बैठकका लागि प्रचण्डसहित ५ सचिवालय सदस्यले लेखेको पत्र, प्रधानमन्त्री ओलीको पत्र र प्रचण्डले लेखेको पत्र सबैलाई समेटेर दस्तावेजका रूपमा नेकपाका तल्ला कमिटीमा पठाइएको छ।
'आरोप पत्र'का रूपमा आएको प्रस्तावलाई तल्ला कमिटीमा पठाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित बनेका छन्।
'कसको अनुमतिले तपाईंले तल पठाउनु भएको हो। पार्टीमा तपाईंको मनोमानी चल्दैन। तपाईंको समूहमा चलेजस्तो होइन यो नेकपा हो,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'यसले विधान, अनुशासन, पद्धतिको र सहमतिको अभ्यास सबैको उल्लंघन गरेको छ। अनुशासनहीन काम गर्नुभएको छ। यसमा तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने? तपाईंमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ। यसमा माफी माग्नुस् र क्षमायाचना गर्दै फिर्ता लिनुस। आइन्दा यसो नगर्ने भनेर बैठकलाई भन्नुहोस्।'
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूलाई उत्तेजित पार्न खोजेको बताएका थिए।
'तपाईंले हामीलाई उत्तेजित बनाउन खोज्नुभएको छ। तर हामी उत्तेजित हुँदैनौ। हामी गम्भीर छलफल गरेर सकारात्मक निश्कर्ष निकाल्ने पक्षमा छौं,' प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने,'यो मित्रतापूर्ण अन्तरविरोध हो, शत्रुतापूर्ण होइन। तपाईंले शत्रुतापूर्ण बनाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। तपाईंले यो अन्तरसंघर्षलाई कटु बनाउन फायर खोलेपछि मात्रै हामीले प्रस्ताव लेख्या हो।'
प्रधानमन्त्री ओलीले गुटको खेती गरेको भन्दै प्रचण्डले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए। आफूहरू पार्टी एकताको रक्षा गर्दै अघि बढ्ने समेत बताएका थिए।
माधव नेपालले ओलीलाई भने- समस्याको जरो तपाईं
बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीकै कारण पार्टीभित्र समस्या आएको बताएका थिए। उनले पार्टीलाई कसैको पेवा नसम्झिनसमेत चेतावनी दिएका थिए।
'यो पार्टी विभाजनको आतंक फैलाउने अन्तरविरोधलाई दुश्मनीपूर्ण भयो भनेर प्रचार गर्ने र पार्टी फुट्छ भनेर भन्ने को हो?' नेपालको भनाइ उदृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने,'पार्टी कसले फुटाउँछ। पार्टी फुट्दैन। विभाजनको आतंक कसैले नछरे हुन्छ। सबै समस्याको जरो तपाईं हो।'
नेपालले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिवाद र फुटवाद नै सबै समस्याको जड भएको भन्दै आफूलाई रूपान्तरण गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।
'यो पार्टी दुई अध्यक्ष मिलेरमात्रै बनेको होइन। यो दुई पार्टीको एकता हो। त्यसैले व्यक्तिले चाँहदैमा पार्टी फुट्ने अनि दुई अध्यक्षका बीचमा सहमति हुँदैमा सबै मिल्ने भन्ने हुदैन,' नेपालले बैठकमा भनेका थिए, 'तपाईंमा घमण्ड छ। मूल समस्या नै तपाईं हो। म तपाईंसँग हरेक विषयमा बहस र छलफल गर्न तयार छु।'
पार्टी फुटाउनेको टाउको फुटाउने भनेर भन्नेहरूसँग आफू सहमत रहेकोसमेत उनले बताएका थिए। उनले पार्टी फुटाए पूर्वएमालेहरू एक ठाउँमा आइहाल्छन् भन्ने नसोच्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिए।
अरु सदस्यहरूले के भने?
बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सहमतिको माला कहिलेसम्म जप्ने हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले दुनियाँमा कहीँ नभएको सहमतिका पछि लाग्न नहुने भन्दै सहमति नभए विधि पद्धतिमा जानु पर्ने बताएका थिए।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दुइटै प्रतिवेदन छलफलमा गएकाले यसबारे विवाद गर्न जरूरी नरहेको बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले समेत छलफलमा भाग लिइसकेको बताएका थिए।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रस्तावबारे छलफल सुरू भइसकेको भन्दै यसलाई निषेध गर्न नपाइने बताए। उनले छलफल गरेर एउटा निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने उल्लेख गरे।
उपप्रधानमन्त्री एवम् सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रस्तावहरू बाहिर गइसकेकाले छलफलै गर्न नदिनुको अर्थ नरहने बताएका थिए।
सचिवालय सदस्य एवम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रचण्डको प्रस्ताव ल्याउनु गलत भए पनि पार्टीमा आइसकेपछि छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
बुधबारको बैठकमा नआउने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने-नगर्नेमै बैठक केन्द्रीत भएपछि प्रचण्डले बैठकको अन्तिममा बुधाबार बैठक गर्ने निर्णय सुनाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक बैठक नगरी अनौपचारिक बैठकमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
'प्रधानमन्त्रीले १०-२० दिन बैठक नगरौ| भन्नुभयो। उहाँले अनौपचारिक छलफलमा जोड दिनुभएको थियो। हामीले औपचारिक बैठक पनि गर्ने र अनौपचारिक छलफल पनि गर्ने भन्यौ,' एक सचिवालय सदस्यले भने,'तर उहाँ यस्ता बैठकको के काम भन्दै उठ्नुभएको थियो। भोलिको बैठकमा उहाँ नआउने खतरा बढेको छ।'
प्रचण्डले एकतर्फी घोषणा गरेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नजाने उनी निकट स्रोतको दाबी छ।
'तपाईंहरू विभाजन, सर्वनाश र विखण्डनतिर जाने हो भने किन बैठक गर्नुपर्यो, बैठकको औचित्य छैन। के गर्न खोज्या हो गरेर अगाडि बढ्नुस,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'बैठक गर्ने समझदारी गर्ने पार्टी एकतालाई बलियो बनाएर जाने हो भने छलफल गर्ने औपचारिक-अनौपचारिक छलफल गरेर साझा प्रस्ताव बनाउने हो। त्यसका लागि समय लाग्छ। भोलि मेरो निर्धारित अरू काम छ, म बैठकमा आउँदिनँ।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १६, २०७७, २१:५२:००
भृकुटीमण्डपमा ‘नमूना संसद’! (तस्बिरहरू)